Mac ပေါ်မှာ COC စစ်တုိုက်မယ်
10:04 PM စာချစ်သူ No comments
စာမရေးဖြစ်တာကြာနေပြီဖြစ်လို့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေနဲ့ မအားတာရယ်။ ရေးဖုို့ စိတ်ကူးကလည်း မရှိတာကြောင့် မရေးဖြစ်ဘူးဆုိုပါတော့။ ဒီနေ့တော့ ရေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာလုို့ ရေးဖြစ်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဖုန်းလေးနဲ့ စစ်တုိုက်နေတာ တွေ့နေတာကြာပြီ။ စိတ်မဝင်စားတော့ ဘာလဲလုို့ မမေးမိဘူး။ ကုိုယ်က စကားပြောရင်တောင် အနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ် ဘာညာနဲ့ အပြောခံရသေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ စပ်စုကြည့်လုိုက်တော့ Clashs of Clans (COC) စစ်တုိုက်နေတယ်ဆုိုတာ သိရတော့တယ်။ ကုိုယ်လည်း ဆော့မယ်ပေါ့.....စတုိုက်တာ နေ့ရော ညရော ကုိုယ်ပါ COC သမားဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ် :P
နေ့ရော ညရောဆော့နေတာ ကြာတော့ မျက်လုံးထိလာတယ်။ ဖုန်းက ပူလာတယ်။ ဒီတုိုင်းဆုို မဖြစ်တော့ဘူး။ Mac ပေါ်မှာ ကစားရရင် ကောင်းမှာပဲလုို့ တွေးမိတယ်။ မြင်ကွင်းကလည်း ကျယ်တယ်လေ။
ဒါနဲ့ အသဲအသန်ရှာတော့တာပဲ.... တွေ့ပါတယ်။ Bluestacks တို့ VirtualBox တို့ သုံးကြည့်တယ်။ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။ တကယ့်ကို အဆင်မပြေတာ။ နောက်ထပ် တွေ့တာက Genymotion သူလည်း အဆင်မပြေဘူးဗျ။ COC ဝင်လုို့တော့ရတယ်။ နေရာစုံရွေ့မရဘူး။
နောက်ဆုံး အခု ကျနော်သုံးနေတဲ့ Droid4X နဲ့မှ အဆင်ပြေတော့တယ်။ ကောင်းလုိုက်တာဗျာ။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ စစ်တုိုက်ရတာ အရမ်းကုို အဆင်ပြေတယ်။ ကျနော် ဆော့နေတာ Level6တောင် ရောက်နေပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှာနေကြတယ်ဆုိုတာ သိနေလို့ ပြန်ပြီး Share ပေးဖုို့ စိတ်ကူးရတာနဲ့ ပုို့စ်တင်ဖြစ်သွားတယ်။
Playstore က အရန်သင့်ပါပြီးသားဗျာ။ Gmail အကောင့်တစ်ခု ရှိတာနဲ့တင် Mac ပေါ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး COC စစ်တုိုက်လုို့ရပြီဗျာ။ Android ဗားရှင်းကလည်း ကြည့်လုိုက်ဦး 4.2.2 လန်းချက်က9ဟုိုဘက်ကို လွန်တယ်ဗျာ။
တခြား Android App တွေလည်း Mac ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ သုံးလုို့ရတယ်။ Phone နဲ့ Control လုပ်သုံးလုို့တောင် ရသေးတယ်။ ဒီမှာတော့ Mac သမားတွေအတွက်မုို့ Mac အတွက်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံကြည့်တာနဲ့တင် COC စစ်တုိုက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားမယ် ;)
မျိုးမင်းဟန် (စာချစ်သူ )
Root Call Blocker Pro v2.0.3.5 Apk
10:00 PM စာချစ်သူ No comments
Android 2.3 အထက် ဗားရှင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော Root Call Blocker Pro
10:26 AM စာချစ်သူ No comments
SuperSU Pro v1.51 Apk ပါ။ နောက်ဆုံးထွက်မို့ Root လုပ်သူတိုင်း မရှိမဖြစ်ပါ။
12:17 PM စာချစ်သူ No comments
ကျမ်းကိုး ကျမ်းကား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ
လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်ရင်း ..
လက်ပူထိုး ကျက်မှတ်ပြီး ..
ဖျော်ဖြေရေးသရုပ်ပြနေတာတွေ အားလုံး ..
ရပ်ကြပါတော့ ။ ။
Internet Download Manager 6.17 build3Full Version
12:05 PM စာချစ်သူ No comments
Internet Download Manager 6.17 build3Full Version။ မနေ့က နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ IDM 6.17 Build3လေးပါ။
3:31 PM စာချစ်သူ No comments
GO Launcher EX Prime v4.01 beta4 Apk
What New : - (New) 3D Core is available for everyone(In ‘Preferences’)
Download Here in Dropbox
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ Dataများကို ပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Wondershare Dr.Fone
12:19 AM စာချစ်သူ No comments
iPhone 4s အတွက် ပျောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မှားဖျက်မိလိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ဓာတ်ပုံ မက်ဆေ့ Call history မှတ်စု စတဲ့ i Device မှာ ရှိတဲ့ data များကို ပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Software လေးဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်နည်းက ၁။ သင့်ရဲ့ iPhone ကို PC နဲ့ ချိတ်ပါ။
၂။ Start Button ကို ကလစ်ပေးပြီး ခဏစောင့်ပါ။ Recover လုပ်ရန် သင့်ဖုန်းကို Scan ဖတ်နေပါတယ်။
၃။ ဘယ်ဘက်ပေးမှာရှိတဲ့ သင် Recover လုပ်လိုတဲ့ အမျိုးစားကို အမှတ်ပေးရွေးချယ်ပြီး အောက်ခြေက Recover ကို ကလစ်ပေးပါ။
သင့်ဖုန်းက Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ Restart ပြန်တက်လာပြီးရင် သင် ပြန်လိုချင်တဲ့ data များ သက်ဆိုက်ရာ ကဏ္ဍတွေဆီမှာ ပြန်လည် ရာက်ရှိနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
full Version ဖြစ်ပါတယ်။ ကီးပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ကီးထည့်နည်းကတော့ ပုံကအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
4:29 PM စာချစ်သူ No comments
Android အတွက် City Maps 2Go Pro Offline Map လေးပါ။ အင်တာနက် မရှိလည်း စိတ်မပူရတော့ဘူး။ offline အနေနေဖြင့်လည်း ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ နေရာများကို နေရာစုံအောင် ကြည့်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး နေရာများရဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားလို့ သုံးရတာ အဆင်ပြေမှာလိမ့်မယ်။ ။
8:51 PM စာချစ်သူ No comments
Android ဖုန်းနှင့် Tabletများအတွက် Vire Launcher Premiumလေးပါ။ Launcher အလန်းတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်တဲ့သူ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Vire Launcher Premium v1.7.5.9.4 Patched Apk
ပန်းသီးတို့အတွက် ပြက္ခဒိန် အလန်းလေး
5:39 AM စာချစ်သူ No comments
ပန်းသီးတို့အတွက် ပြက္ခဒိန် အလန်းလေးပါ။ iOS7အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်တယ်ထင်ပါရဲ့...။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ iOS7မှာတော့ သုံးလို့မရသေးပါဘူး။ လန်းလွန်းလို့ ကြည့်တာနဲ့တင် သုံးချင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Notebook တစ်ခုလို မိမိအတွက် အရေးကြီးတဲ့ နေ့ရက်တွေကို တိတိကျကျ မှတ်သားပေးနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Cal | Your life. Your Calendar to Download Here
iOS7 မှ iOS 3.1.3 သို့ Downgrade ဆင်းနည်း
3:08 PM စာချစ်သူ No comments
အသစ်သစ်စက်စက် iOS7မြှင့်တင်ပြီး ipa, cydia tweaks များ Jailbreak မရလို့ ညစ်နေသူများအတွက် iOS7 မှ iOS 3.1.3 သို့ Downgrade ဆင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပထမဦးစွာ ဒီနေရာ မှ iOS 6.1.3 ကို ဒေါင်းလွတ်လုပ်ပြီး အလွယ်တကူတွေ့နိုင်တဲ့ မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ desktop ပေါ်မှာ တင်ထားပါ။
၂။ Downgrade ဆင်းလိုသော iOS7 beta အသုံးပြုနေသော iDevice ကို PC ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
၃။ iTunes ကို ဖွင့်ပါ။ သင်၏ iDevice ရွေးပါ။ Option+click in Mac or Shift+click in Windows ကို ကလစ်ပါ။ Restore ကို ကလစ်ပါ။
၄။ အစောက ဒေါင်းလွတ်ယူထားတဲ့ iOS 6.1.3 ရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့် IDevice ကို အောင်မြင်စွာ iOS 6.1.3 သို့ Downgrade ဆင်းနိုင်ပါပြီ။
အောက်က Video ကို ကြည့်ပြီး ပြုလုပ်နိုင်တယ်။
[Read More at iOS Blog ©Private Blog]
စစ်တိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက် Arma Tactics THD စစ်တိုက်ဂိမ်း
1:34 PM စာချစ်သူ No comments
စစ်တိုက်ဝါသနာပါသူများအတွက်ပါ။ ဆိုက်မှာ ဂိမ်းတွေ တင်လေ့တင်ထမရှိပေမဲ့ ဒီဂိမ်းလေးက တကယ်ကို ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ စစ်တိုက်ဂိမ်းဖြစ်လို့ ဖိုင်ဆိုက်က ကြီးပါတယ်။ 201.73 MB တောင် ရှိပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ အဆင်ပြေမှ ဒေါင်းပါ။ ဖုန်းပျက်ရင်တော့ တာဝန်မယူ :P
Arma Tactics THD >>> Download in Dropbox
11:37 PM စာချစ်သူ No comments
Galaxy Wallpaper လှလှလေးတွေ သုံးချင်သူများအတွက်ပါ။ Galaxy S4 Balloon LWP HD Wallpaper များပါ။ အရမ်းလှပါတယ်။ လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူကြပါ။ ။
Galaxy S4 Balloon Wallpaper >>> Download in Dropbox
Android ဖုန်းအတွက် Arikui Launcher 0.6.8
1:48 PM စာချစ်သူ No comments
Android ဖုန်းအတွက် Arikui Launcher 0.6.8 ။ ဖုန်းတော်တော်များမှာ Support မလုပ်ပါဘူး။ လန်းတယ်ဗျ။ Support လုပ်တဲ့ Device များတော့ ......
Arikui Launcher >>> Download in Dropbox
Email ထားခဲ့ပါ !
Email ထားခဲ့ပါ အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါ့မယ်:
ကျနော် ဒီ Viber မြန်မာဗားရှင်းကို လွပ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ကို ရည်ဇူးပါတယ် ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ...
ကျနော် အခုပြောမယ့် iPhone များအတွက် Ringtone အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်းကို iDevices များနဲ့ မရင်းနှီးသေး သူ Ringtone မလုပ်တတ်သေးသူများနှင့် ကိုယ်...
Zawgyi Font for iOS 6.1 ကို Update လုပ်ပေးလိုက်ပြီ
Viber မြန်မာဗားရှင်းမှာ မြန်မာလိုရေးလို့ ဖတ်လို့ရနေပေမယ့် သဝေထိုး (ေ) နဲ့ ရရစ် (ြ ) အတွက် အခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ပြဿနာကို ကိုစေတန်ဂေါ့က U...
iPhone ထဲ သီချင်း ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ အလွယ်တကူ ထည့်နည်း
သီချင်း ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေကို iPhoneထဲကို အလွယ်တကူ ထည့်နည်လေးပါ။ မသိသေးသူများကို အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလွတ်လုပ်ရတာလည်း ဖိုင်ဆိုက်...
Apple Store ကနေ တိုက်ရိုက် install လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်ကနေ ipa ဖိုင်များကို ဒေါင်းလွတ်လုပ်ပြီး မိမိရဲ့ PC ကနေ install လုပ်နည်းပါ။ လုပ်နည်...
Viber ကုတ် ရအောင်လုပ်နည်း
သတိပြုရန်။ ။ သင့်ဖုံးမှာ Viber မရှိဘူးဆိုရင် သင့် PC မှာ Viber အသုံးပြုရန် မရနိုင်သေးပါ။ PC မှာ သုံးတဲ့ Viber အတွက် ကုတ်ရဖို့ ခက်ခဲနေသူ...
iPhone 4s အတွက် ပျောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မှားဖျက်မိလိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ဓာတ်ပုံ မက်ဆေ့ Call history မှတ်စု စတဲ့ i Device မ...
စာမရေးဖြစ်တာကြာနေပြီဖြစ်လို့ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေနဲ့ မအားတာရယ်။ ရေးဖုို့ စိတ်ကူးကလည်း မရှိတာကြောင့် မရေးဖြစ်ဘူးဆု...
Melody World သံစဉ်များနဲ့ ကမ္ဘာ (Flash songs)
အလွမ်းသင့် ပန်းချီ နင်စေရင် အမေ အချစ်အတွက်ကိုယ်စား ဆုတောင်းမယ် ခဏတာ မင်း စလုံးကချစ်သူ အင်းယားသို့ စာမျက်နှာတစ်ဆယ့်ငါး မင်းကို...
မြန်မာ iPhone user များအတွက် myominhan's cydia source
မြန်မာ iPhone user များအတွက် ကျနော့်နာမည် နဲ့ Cydia Source တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ အပြီးပြည့်စုံမဟုတ်တောင် မြန်မာ iPhone user များအတွက် အဆင်ပြေ...
Eng Poem (3)
i Phone (26)
Melody World (1)
Better Tomorrow -
တိမ်လို လွင့်တဲ့ ကြယ် (သာရလင်း)
♥♥♥ 15 ♥ 1 ♥ 2011 ♥♥♥
အလည်လာတဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Copyright © 2011 စာချစ်သူ | Powered by Blogger